Ph.D ဒေါက်တာ ဆိုတာ ? http://maukkha.org/index.php/feature-article/3267-m-a-japan « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Uncategorized » Ph.D ဒေါက်တာ ဆိုတာ ? http://maukkha.org/index.php/feature-article/3267-m-a-japan
Ph.D ဒေါက်တာ ဆိုတာ ? http://maukkha.org/index.php/feature-article/3267-m-a-japan
Details Category: ဆောင်းပါး Published on Sunday, 19 May 2013 11:24 Written by နန်းဦးလွင် (M.A, Japan)
Ph.D ရဲ့ full form ဟာ Doctor of Philosophy ပါ။ British English က Ph.D လို့ရေးပြီး အမေရိကန် အင်္ဂလိပ်က Ph.D လို့ရေးပါတယ်။ တချို့တက္ကသိုလ်တွေက doctorate လို့ သုံးပါသေးတယ်၊ D.Sc (Doctor of Scinece) လို့ သုံးတဲ့တက္ကသိုလ်လည်း ရှိပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့မူရင်းအရင်းအမြစ်သဘောကို စပြောပါမယ်။ First Degree လို့ခေါ်တဲ့ ပထမဆုံးရတဲ့ ဘွဲ့ကနေ M.A or M.Sc – မဟာသိပ္ပံ၊ မဟာဝိဇ္ဇာတန်းတက်ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ တချို့တက္ကသိုလ်က နှစ်နှစ်ကြာပါတယ်။ တချို့က ၁၈ လကြာ ပါတယ်။ တချို့က တစ်နှစ်ပဲကြာပါတယ်။ Thesis လို့ခေါ်တဲ့ ကျမ်းစာတင်ပြီး ကျေနပ်မှဘွဲ့ပေးတာပါ။
အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၁၄)၊ မေ – ၁၆၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်
← တရုတ်-မြန်မာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စာချု ပ်များ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုဖို့ လိုလား	Nigerian army blockades Boko Haram base http://ow.ly/lb8pa →